Nezvedu - SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD ine chiratidzo CORENTRANS®, seunyanzvi hwekutengesa simbi yekugadzirisa michina uye mhinduro dzakabatana. Kubva pakagadzwa muna 2010,CORENTRANS® yakazvipira kupa Yakakwira-Yemhando simbi michina & yakasanganiswa mhinduro. Zvigadzirwa zvepamusoro zvinosanganisira Slitting Line, Cheka-ku-Kureba Mutsetse, Muchina wekudhinda, Tube & Pipe Mill, ERW Tube Mill, isina simbi Pipe Mill, Tube yekupedzisira yekupedzisa michina, waya yekudhira muchina, mupumburu unogadzira zvishandiso, maelekitirodhi mutsara, maindasitiri ekuparadzanisa mativi & zvinopedza.
Isu takagara tichitungamirwa nevatengi kukosha uye kudiwa, yakazvipira kupa mhando yepamusoro uye yakakodzera michina uye mapurojekiti kubatsira vatengi kuwedzera zviwanikwa uye nekukurumidza kugadzirisa zvemuno zvekugadzira matambudziko. Nemakore gumi ekuvandudza, vatengi vedu vane mukurumbira mu Africa, Middle East, South Asia, neAmerica vakagadzira kuve vanokwikwidza mugadziri munharaunda.
Iyo inonyanya kukosha mukana weCORENTRANS®inosangana panguva yakakodzera uye inoshanda sevhisi. Vimba neanenjineri timu, uye isu tinopa inonzwisisika pre-kutengesa kubvunzana, kuitisa mishumo, uye michina kusarudzwa, imwe neimwe yakatengesa michina ine yakasarudzika faira kune vese vatengi kuti vape kwenguva-refu sevhisi uye spare zvikamu zvinopihwa.
Kubva muChina, basa redu nderokuziva kudyidzana kwepasi rose kwezvinhu zvepamusoro zvemabhizimusi nemhinduro!
Ndatenda nekuterera kwako! CORENTRANS® iri kutarisira kuwana kubatsirana nekubatana kwenguva refu!
Fekitori yedu ine 6S manejimendi sisitimu yekufupisa kushanda kutenderera, kudzikisa mutengo wekugadzira, kugadzirisa kugadzirwa kwekuita, kuverengera mhando yechigadzirwa.
Kunyatsogadzirisa zvigadzirwa zvekugadzira sevanhu, michina, zvishandiso uye nzira munzvimbo yekugadzira kuti uvandudze huwandu hwese hwebasa. Kunzwisisa kwakazara kwevatengi zvinodiwa, zvichipa hunyanzvi dudziro uye kupindura mibvunzo kune vatengi.
Iyo yepamusoro-tech mubatanidzwa inobata mukutsvaga, kusimudzira, uye kugadzira kwesimbi yekugadzira michina muShanghai. Nemutengo unonzwisisika, yeEuropean standard standard control, 7 * 24 yese-nguva-mushure-yekutengesa sevhisi, zvikamu zvekugovera.
Iyo Machina. Mhinduro yacho. Mashoko acho
michina & mhinduro yakasanganiswa
Mutengo unonzwisisika, Kukurumidza Kuendesa, Kumhanya kwakadzikama, uye Kubhadhara nekukurumidza,